CryptoBullion စျေး - အွန်လိုင်း CBX ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို CryptoBullion (CBX)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ CryptoBullion (CBX) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ CryptoBullion ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $380 047.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ CryptoBullion တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
CryptoBullion များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
CryptoBullionCBX သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0374CryptoBullionCBX သို့ ယူရိုEUR€0.0317CryptoBullionCBX သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0286CryptoBullionCBX သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.034CryptoBullionCBX သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.332CryptoBullionCBX သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.236CryptoBullionCBX သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.828CryptoBullionCBX သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.139CryptoBullionCBX သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0494CryptoBullionCBX သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0523CryptoBullionCBX သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.83CryptoBullionCBX သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.29CryptoBullionCBX သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.201CryptoBullionCBX သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹2.8CryptoBullionCBX သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.6.31CryptoBullionCBX သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0513CryptoBullionCBX သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0573CryptoBullionCBX သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.16CryptoBullionCBX သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.26CryptoBullionCBX သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥4CryptoBullionCBX သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩44.34CryptoBullionCBX သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦14.48CryptoBullionCBX သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽2.74CryptoBullionCBX သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.03
CryptoBullionCBX သို့ BitcoinBTC0.000003 CryptoBullionCBX သို့ EthereumETH0.0001 CryptoBullionCBX သို့ LitecoinLTC0.000687 CryptoBullionCBX သို့ DigitalCashDASH0.000412 CryptoBullionCBX သို့ MoneroXMR0.00042 CryptoBullionCBX သို့ NxtNXT2.92 CryptoBullionCBX သို့ Ethereum ClassicETC0.00551 CryptoBullionCBX သို့ DogecoinDOGE10.79 CryptoBullionCBX သို့ ZCashZEC0.000454 CryptoBullionCBX သို့ BitsharesBTS1.15 CryptoBullionCBX သို့ DigiByteDGB1.2 CryptoBullionCBX သို့ RippleXRP0.133 CryptoBullionCBX သို့ BitcoinDarkBTCD0.00129 CryptoBullionCBX သို့ PeerCoinPPC0.124 CryptoBullionCBX သို့ CraigsCoinCRAIG17.04 CryptoBullionCBX သို့ BitstakeXBS1.59 CryptoBullionCBX သို့ PayCoinXPY0.653 CryptoBullionCBX သို့ ProsperCoinPRC4.69 CryptoBullionCBX သို့ YbCoinYBC0.00002 CryptoBullionCBX သို့ DarkKushDANK12 CryptoBullionCBX သို့ GiveCoinGIVE80.98 CryptoBullionCBX သို့ KoboCoinKOBO8.52 CryptoBullionCBX သို့ DarkTokenDT0.0344 CryptoBullionCBX သို့ CETUS CoinCETI107.99
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 04:35:03 +0000.